Xinhua Myanmar - COVAX အစီအစဉ်ဖြင့် နိုင်ငံပေါင်း ၂၀ ထံ COVID-19 ကာကွယ်ဆေး သန်း ၂၀ ကျော် ပေးပို့ထားကြောင်း WHO ပြော
COVAX အစီအစဉ်ဖြင့် နိုင်ငံပေါင်း ၂၀ ထံ COVID-19 ကာကွယ်ဆေး သန်း ၂၀ ကျော် ပေးပို့ထားကြောင်း WHO ပြော
ကို့တ်ဒီဗွာနိုင်ငံသမ္မတရုံး အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး Patrick Achi (ဝဲ) အား ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုခံယူနေသည်ကို တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ) INTERNATIONAL ORGANIZATION
ဂျနီဗာ၊ မတ် ၆ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) နှင့် မိတ်ဖက်အဖွဲ့များမှ ပူးတွဲအကောင်အထည်ဖော်ထားသော နိုင်ငံတကာ ကာကွယ်ဆေးကမ်ပိန်း COVAX က နိုင်ငံပေါင်း ၂၀ ထံ COVID-19 ကာကွယ်ဆေး သန်း ၂၀ ကျော် ပေးပို့ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း WHO အကြီးအကဲက မတ် ၅ ရက်၌ ပြောကြားခဲ့သည်။
အာဖရိကတွင် COVAX က ပံ့ပိုးသောဆေးများအသုံးပြုလျက် ပထမဆုံး COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်း ကမ်ပိန်းများကို ဂီနီနှင့် ကို့တ်ဒီဗွာ (Cote d'Ivoire) စသည့်နိုင်ငံများတွင် ယခုသီတင်းပတ်အစောပိုင်း၌ စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
လာမည့်သီတင်းပတ်တွင်လည်း COVAX က နောက်ထပ်နိုင်ငံ ၃၁ နိုင်ငံသို့ ကာကွယ်ဆေး ၁၄.၄ သန်း ပေးပို့သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း WHO ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Tedros Adhanom Ghebreyesus က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ ပြောကြားခဲ့သည်။
သို့သော်လည်း COVAX မှတစ်ဆင့်ဖြန့်ဖြူးသော ကာကွယ်ဆေးအရေအတွက်မှာ လွန်စွာနည်းပါးနေဆဲဖြစ်ကြောင်း၊ ကာကွယ်ဆေးလက်ခံရရှိသော နိုင်ငံများရှိ လူဦးရေ ၂ မှ ၃ ရာခိုင်နှုန်းကြားအတွင်းသာ လွှမ်းခြုံမှုရှိကြောင်း ၎င်းက ပြောခဲ့သည်။
WHO အနေဖြင့် ထုတ်လုပ်မှုအရှိန်မြှင့်တင်ရန်နှင့် ပမာဏတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက် ကာကွယ်ဆေး ထုတ်သော ကုမ္ပဏီများနှင့် အဆိုပါကာကွယ်ဆေးများအား ပိုမိုလျင်မြန်စွာ ဖြည့်သွင်းပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်သော ကုမ္ပဏီများအား ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်ရန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်လျက်ရှိကြောင်း Tedros က ပြောခဲ့သည်။
ကာကွယ်ဆေး မူပိုင်ခွင့်ရရှိထားသော ကုမ္ပဏီများမှ ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်နိုင်သော ကုမ္ပဏီများထံသို့ ကာကွယ်ဆေးနည်းပညာ လွှဲပြောင်းရေးအတွက်လည်း တိုက်တွန်းထားကြောင်း ၎င်းက ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
“ဒီကိစ္စအတွက် အကောင်းဆုံးဥပမာကတော့ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံက SKBio နဲ့ Serum Institute of India တို့ကို ကာကွယ်ဆေးနည်းပညာတွေ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့တဲ့ AstraZeneca ပဲဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာ COVAX အတွက် AstraZeneca ကာကွယ်ဆေးတွေကို ထုတ်လုပ်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ ” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
COVAX အနေဖြင့် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများ ရရှိရေးတွင် မည်သည့်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံကိုမျှ နောက်ကျမကျန်ရစ်စေရန် ရည်ရွယ်ထားကြောင်း၊ ၎င်း၏ ဗဟိုရည်မှန်းချက်မှာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် ကာကွယ်ဆေး အရေအတွက် ၂ ဘီလီယံ ပေးပို့နိုင်ရန် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Source: Xinhua| 2021-03-06 05:33:04|Editor: huaxia
GENEVA, March5(Xinhua) -- COVAX, the international vaccine campaign co-led by the World Health Organization (WHO) and its partners, had delivered more than 20 million doses of COVID-19 vaccines to 20 countries, the WHO chief said on Friday.
Earlier this week, the first COVID-19 vaccination campaigns in Africa using doses provided by COVAX began in Ghana and Cote d'Ivoire.
"A good example of this approach is AstraZeneca, which has transferred the technology for its vaccine to SKBio in the Republic of Korea and the Serum Institute of India, which is producing AstraZeneca vaccines for COVAX," he said.
COVAX aims at ensuring that no participating economy will be left behind in accessing COVID-19 vaccines. Its core target is to deliver two billion vaccine doses by the end of 2021. Enditem
Patrick Achi (L), the secretary general of the presidency of Cote d'Ivoire, receivesajab of the COVID-19 vaccine in Abidjan, Cote d'Ivoire, March 1, 2021. Cote d'Ivoire joined the first COVID-19 vaccination campaigns in the world on Monday with doses provided by COVAX,aglobal initiative for equitable access to COVID-19 vaccines. (Photo by Yvan Sonh/Xinhua)
Previous Article ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းကို ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများတွင် ပိုမိုလုပ်ဆောင်ကြရန်တိုက်တွန်း
Next Article ဝင်ငွေမြင့်မားနိုင်ငံများ၏ ကာကွယ်ဆေးဝယ်မှုစာချုပ်များက COVAX အစီအစဉ်ကို ထိခိုက်စေကြောင်း WHO ပြောကြား